China Vented Seal Liner fekitari uye bhizimisi | 品牌 名 / 公司 名
Chisimbiso chakaburitswa chakagadzirwa nefirimu inofema uye Chivharo chekupisa chekupisa (HIS) kuburikidza neiyo ultrasonic kana inopisa inonyungudika kutenderera, iyo inonyatsozadzisa mhedzisiro ye "inofema uye isina kuvuza". Iyo yakavharwa chisimbiso ine yakapusa dhizaini, yakanakisa mweya kubvumidzwa uye yakanakisa kuramba kune vanoshanda kumeso. Ichi chigadzirwa chinogadzirirwa kudzivirira chigadziko chekuzadza (bhodhoro) kubva pakuzununguswa kana kuiswa pamatembiricha akasiyana kuti agadzire gasi mushure mekuzadza imwe mvura, nokudaro zvichikonzera mudziyo kuti uumbike kana hombodo yebhodhoro itsemuke.
Yakaburitswa liner yakanakisa yekufema kuita muindasitiri, nzira zhinji dzekubuditsa dzinozadzisa zvakasiyana kuita kwekuita. Inopihwa mune chimwe chidimbu furo kana maviri chidimbu wakisi yakasungirirwa kune pulp.
Vent liner inokodzera PET, PVC, PS, PP, PE… mabhodhoro epurasitiki nemabhodhoro egirazi, uye anonyanya kushandiswa kune zvekudya, zvigadzirwa, mishonga yemishonga, mishonga yekuuraya zvipuka, makemikari, zvigadzirwa zvigadzirwa kurongedza.
Raw zvinhu: Kadhibhodhi + Aluminium Foil + Plastiki Firimu
Hurefu Ukobvu: 0.2-1.2mm
Mhepo inokwenenzverwa membrane inoenzana kumanikidza uye inodzivirira midziyo kubva pakuputika, kudonha kana kubuda.
Yakasarudzika yekutsikirira-inokodzera dhizaini inosangana zvirinyore kuburikidza nemaoko kana otomatiki kuisirwa.
Wide rondedzero yemasize ekushambadzira uye akagadzirira-kushandisa-zvigadzirwa izvo zvinovandudza pasuru pasina kugadzirisazve.
1. Inofema uye isina kubvaruka
2. Yakanyanya nyore kuvhura
3. Dzivirira kubuda kunodhura
4. Deredza njodzi yekukanganisa, kusimudzira, uye kusvibisa
5. Wedzera hupenyu hwesherufu
6. Gadzira hermetic zvisimbiso
7. Zvakatipoteredza zvine hushamwari
Pashure: Furo Liner
Zvadaro: 3-Dzimba Foam Liner
Maviri-chidimbu Kupisa Induction Seal Liner nePepa ...